အ ၀ တ်ဟောင်းတစ်ခုကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြန်ယူနည်း Bezzia
တောရက်စ် | 07/10/2021 10:00 | ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ, အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ
အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာသင်တတ်နိုင်သောကြောင့်အ ၀ တ်ဟောင်းတစ်ခုကိုပြန်ယူခြင်းသည်မည်သူမဆိုအတွက်သင့်တော်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ပရိဘောဂအဟောင်း (သို့) ခနော်ခနဲ့အပိုင်းအစကိုပြောင်းပါသင့်အိမ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်း ရှေးဟောင်းပရိဘောဂများတွင်အထူးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ ပုံစံမျိုးစုံ၊ အသေးစိတ်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းများသည်ယခုဝတ်ဆင်ထားသောဖြောင့်စင်းရိုးရှင်းသောလိုင်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏ပရိဘောဂများထဲတွင်မီးဖိုချောင်သုံးမီးဖုတ်ရှိခြင်းသည်မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆိုပြောင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းအတွက် DIY ဗဟုသုတများစွာရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ပစ္စည်းအနည်းငယ်၊ နည်းနည်းစိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်ဤအကြံပေးချက်များတို့ဖြင့်ရှေးဟောင်းလက်ဝတ်လက်စားကိုအထူးပရိဘောဂတစ်ခုအဖြစ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့ သင်မပြီးမြောက်မီနောက်ပရောဂျက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်.
1 အံဆွဲဟောင်းသေတ္တာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း
1.1 ရှေးဟောင်း ၀ တ်စုံကိုပြန်ယူရန်အဆင့်များ
1.2 ရှေးဟောင်း ၀ တ်စုံတစ်ခုပြန်ယူရန်ပန်းချီနှင့်အလှဆင်သည်
သင်၏ပရောဂျက်ကိုမစမီသင်ပစ္စည်းများအချို့ကိုရယူသင့်သည်။ ဒါပေမယ့်ပရိဘောဂတွေကိုအရင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လိုလိမ့်မယ် ယေဘူယျအားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းအဟောင်းများသည်အလွန်ဆင်တူသည်မရ။ ဆေးသုတ်ရန်သဲနှင့်ဆေးသုတ်ရန်ပရိဘောဂများပြင်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ dresser ကို update လုပ်ဖို့ hardware အသစ်တွေနဲ့လက်ကိုင်တွေရနိုင်တယ်။ အံဆွဲအတွင်း၌တန်းစီရန်စက္ကူသို့မဟုတ်ထည်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဝတ်အစားပျက်စီးလျှင်သစ်သားကိုဖြည့်ရန်နှင့်ပျက်စီးစေရန်ဖုံးအုပ်ရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤအရာများသည်များသောအားဖြင့်ထောင့်များ၊ ခြေထောက်များနှင့်ပရိဘောဂများ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။ DIY စတိုးဆိုင်များတွင်သင်၏အဝတ်ဟောင်းကိုပြန်ယူရန်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်အားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံး၊ ပရိဘောဂများကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသတ်ရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်အဖြူရောင်ရှာလကာရည်ကိုသန့်ရှင်းရန်အကောင်းဆုံး၊ စျေးအသက်သာဆုံးနှင့်ဂေဟစနစ်အရှိဆုံး။
ရှေးဟောင်း ၀ တ်စုံကိုပြန်ယူရန်အဆင့်များ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကပြင်ဆင်မှုမစခင်အဝတ်အစားပြင်ဆင်ပါ။ သစ်သားမျှင်များအကြားတွင်ရှိနိုင်ပါသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့်မှိုများသည်ပရိဘောဂများ၏သက်တမ်းကိုထိခိုက်စေသည်ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပရိဘောဂများကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသတ်ရန်သင်အဖြူရောင်သန့်ရှင်းရေးရှာလကာရည်နှင့်ရေကိုရောရန်သာလိုသည်။
ဝါဂွမ်းတစ်ထည်ကို သုံး၍ ပရိဘောဂများကိုအညစ်အကြေးများကိုကောင်းစွာဖယ်ရှားပါ။ လိုအပ်ပါကသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်သန့်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပါ။ အသုံးမပြုမီအခြောက်ခံပါ အောက်ပါအဆင့်များနှင့် သစ်သားခြောက်သွေ့သောအခါဖြစ်နိုင်သောပျက်စီးမှုမှန်သမျှကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ အကယ်၍ သင်သည်ကွက်လပ်သေးသေးလေးများဖြည့်ပါကသစ်သားပြုပြင်ရန်ပူတင်းကိုသုံးပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့အရောင်တင်ဆီ (သို့) ကြွေအဟောင်းကိုဖယ်ရှားဖို့ပရိဘောဂတစ်ခုလုံးကိုသဲကောင်းကောင်းသုတ်ရမယ်။ မဟုတ်ရင်၊ ဆေးသုတ်အသစ်သည်ကောင်းစွာမလိုက်နိုင်ပါ အဝတ်အစားသို့ အလွယ်ဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာဤလွယ်ကူသော tool ကိုသုံးရန်ဖြစ်သည်။ သင်ပြီးစီးပါကပရိဘောဂမှဖုန်နှင့်သဲကြွင်းကျန်များကိုသေချာစွာသုတ်ရန်စိုစွတ်သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
ရှေးဟောင်း ၀ တ်စုံတစ်ခုပြန်ယူရန်ပန်းချီနှင့်အလှဆင်သည်
ငါတို့မှာဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အဝတ်အစားဟောင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပြီးသဲနဲ့အလှဆင်ဖို့အပျော်ဆုံးအလုပ်ကအချိန်ပဲ။ စျေးကွက်တွင်သစ်သားပရိဘောဂများကဲ့သို့ဆေးသုတ်ရန်အဆုံးမဲ့ထုတ်ကုန်အရေအတွက်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည် chalk effect paint သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကိုခေတ်မီမှု၏အရိပ်အမြွက်များဖြင့်ဖော်ပြသည်မရ။ pastel အရောင်များနှင့်အလွန်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ဖြင့်ပရိဘောဂ၏စရိုက်ကိုထိန်းသိမ်းလိုလျှင်ဤသုတ်ဆေးသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သင်အဝတ်အစားကိုကောင်းစွာသုတ်လိမ်းပြီးအခြောက်ခံလိုက်သောအခါ၎င်းကိုပြန်လည်ပြီးမြောက်ရန်အသေးစိတ်အချက်အနည်းငယ်သာထားရန်လိုလိမ့်မည်။ အသစ်နှင့်အလွန်တောက်ပသောလက်ကိုင်များသည်လုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောပရိဘောဂတစ်ခုထဲသို့စံတင်ထိတွေ့မှုကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်သံချေးတက်လွန်းလျှင် (သို့) အခြေအနေမကောင်းလျှင် hardware ကိုပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကမင်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်ထက်ပိုကြာမှာမဟုတ်ဘူး.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင်ကအပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်တဲ့ dresser ကိုရနိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းလေးများထည့်ပါ။ သင်သာရပါလိမ့်မည် အံဆွဲအတွင်းပိုင်းကိုကော်စက္ကူဖြင့်စည်းပါအဖုံး၊ အ ၀ တ် (သို့) သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသောဗီနိုင်းစက္ကူ ဤနည်းအားဖြင့်သင်တို့၏စံပြနေရာကိုသစ်သားနှင့်အဝတ်မျှင်၌တွေ့ရသောပိုးမွှားများနှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောဧည့်သည်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ » အဝတ်အစားဟောင်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ
သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းဖို့သော့ချက် ၅ ချက်